Keeniyaatti Harra Namootni 22 Dhibee Kooronaan Qabamuun Himame
Ministeerri Fayyaa Keeniyaa sa’aatii 24’n darban kana warra dhibee Kooronaa qabaachuun shakkamanii jiran irratti qorannoo gaggeesseen nama 22 ka Vaayresii kanaan qabame akka adda baase ifoomse.
Mutaahii Kaagween Kaabineen Ministeera Fayyaa biyyattii lakkoofsi kun erga qorannoo jalqabnee isa guddaadhaa jedhan yoo harra ibsa kennan.
“Sa’aatii 24’n darbaan namoota dhibee kanaan shakkine 300’f qorannaa erga taasifneen booda isaan keessaa 22 Vaayresii Kooronaa akka qaban adda baafannee jirra. Lakkoofsi kun lakkoofsa dhibamtootaa Guyyaa tokkotti adda baafne isa guddaadha. Warra Vaayresii kana akka qaban barame 22’n keessaa 13 dhiirota, 9 ammoo dubartoota dha’’ Mutaahi Kaagwee; Kaabinee Minissteera Fayyaa Keeniyaa
Akka ibsa Miister kaagweetti namoota Vaayressiin kun irratti argame 22 keessaa 21, warra mootummaan kanaan dura adda baasee qofaa isaan kaayedha, namni kaan ammo Magaalaa Mombaasaa keessatti ka dhibeen kun irratti mullate. Amma Keeniyaatti namootni dhibee kanaan qabamanii 81, ka gahe yoo tahu, mootummaan warra dhibee kanaan shakkee adda baasee jiru qorannaa irratti gaggeessuu itti fufaa jedhe Ministeerri Fayyaa Keeniyaa.
Dhibee kanaan dursa Keeniyaa keessatti qabamuushee ka adda bahee ture dargaggeettiin ganna 27 tokkos harra Saba himaalee biyyattiin lammilee Keeniyaaf dhaamsa dabarsitee jirti. Pirezdentiin Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaattaas Garee Addaa Dhiibbaa Kooronaan biyyarratti gaggeessu qolachuuf hundeessan duuka maree gaggeessanii jiru. Masaraan Mootummaa Keeniyaa akka beeksisetti Keeniyaattaan dhiyeessa garee kanaaf barbaachisurratti angawoota mootummaa biyyattii duuka marii gaggeessanii jiran.
Kanumaan wal qabatees lammileen Itiyoophiyaa Djibuutii fi Yemen jiraatan labsii yeroo muddamaan dhibee Koronaan wal qabatee biyya keessa jiran irra jiruun rakkoo keessa bu’uu dubbatanii jiru. Dargaggoon Oromoo jibuutii jiraatu mootummaan Jibuutii sochii waan dhorkeeef nami hedduun nyaata dhabee rakkataa jira jedhe. Ka Yemen jiraachuu hime baqataan Oromoo tokkos lammilee Itiyoophiyaa Sana’aa keessa daandiirra jiraataa turan dhibeen kun erga mullatee hidhattoonni fuudhanii haga yoonaa bakki geessan akka hin beekamne dubbatee jira. Sagaleen Ameerikaa Embasii Itiyoophiyaa Jibuutii jirurraa deebii argachuuf yaaliinni taasise hin milkofne fuulduratti hordofnee waan kana ka siniin geenyu ta’a.